Phila ngokuKhanya, ividiyo entsha ye-Apple ukusikhuthaza nge-Apple Watch | Ndisuka mac
Phila ngokuKhanya, ividiyo entsha ye-Apple ukusishukumisela nge-Apple Watch
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sidibene ividiyo entsha ye-Apple eposwe kwimidiya yoluntu. kwakhona iwotshi yeApple ngumlinganiswa ophambili, isimema ukuba siphile ngoncumoNgamana singaba nobomi obomeleleyo nobonwabisayo. Ukufumana konke oku, iqabane elifanelekileyo lophawu liyi-Apple Watch, kwaye ngakumbi ngakumbi kuthotho 2, esivumela ukuba siyithwale phantse nakweyiphi na imeko enkosi kumandla ayo okuntywila kwiimitha ezimbalwa. Ngokufika kwentwasahlobo kunye nemozulu elungileyo, lixesha elifanelekileyo lokuboniswa kweApple Watch. UApple uyayazi kwaye usasaza le vidiyo ukutsala umdla wakho. Kodwa ukuba sele unayo, yisebenzise kakhulu.
Intshukumo, umculo, isenzo, zezona zinto ziphambili zevidiyo ehlala umzuzu omnye. Ngeli xesha, sizifumana sikuzo zonke iimeko apho siya kuthi senze olona thuba lukhulu ekubukeni kwethu: ukuhamba xa sihleli ixesha elide, ukuhamba kwiinkundla zezemidlalo, emadlelweni okanye ukubona iLights Northern, yimizekelo ethile. Kodwa sinokwenza izinto ezininzi ngaphandle kwewotshi yethu yokudanyaza: ukutsiba, ibhola ekhatywayo, ibasketball, ukuhamba ngebhayisikile entabeni, ukudanisa okanye nokusebenza.
Kwaye, ukuba sithetha nge-Apple Watch Series 2, ngokungathandabuzekiyo imisebenzi ejikelezwe ngamanzi ibonakala: ukuqubha, i-trampoline tsiba okanye woyise, phakathi kwabanye. Khumbula ukuba omnye umahluko ophambili ngokunxulumene neApple Watch yokuqala kukuwusebenzisa kwimisebenzi yamanzi okanye ngokunxibelelana nolwelo. Kwakhona kuthotho 2 sifumana iprosesa engcono kunye nokufakwa kweGPS kwizixhobo.
Kubonakala kungakholeki, kodwa nokuba ubukele ividiyo izihlandlo ezi-3 okanye ezi-4, ayikushiyi ungakhathali kwaye uphela unedosi eyongezelelweyo yeadrenaline. Ukuba kuko konke oku songeza ingoma yangasemva kaBeyonce kunye noKendrick Lamar: Inkululeko, imvakalelo iyanda.
Sisandula ukukuxelela kweli phepha, Ukudayala okutsha kweApple Bukela iNike +, ukuze ngokuqinisekileyo ufumane eyona uyithandayo, okanye iindlela ezizezinye onokuzitshintsha amaxesha ngamaxesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Phila ngokuKhanya, ividiyo entsha ye-Apple ukusishukumisela nge-Apple Watch
I-UltraVideoConverter, yasimahla okwexeshana
IMacOS Sierra 10.12.4 esemthethweni, abathengisi beApple, iCarPlay Android Auto ukuthelekisa nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac